गैँडाकोट, १४ चैत्र । गैँडाकोट नगरपालिका वाड नं. १ ले विदेशबाट तत्काल फर्किएका व्यक्तिहरुको लगत संकलन गरिरहेको छ । चैत १ गते यता विदेशबाट फर्र्किनेको संख्या अहिलेसम्मको खोजीमा ४ जना रहेको पाइएको छ । उनिहरुको स्वास्थ्य अवस्था ठीक रहेको र उनिहरु आफ्नै घरमा सुरक्षित रुपमा रहेको गैँडाकोट नगरपालिका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष हरिप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो । एक महिना यता विदेशबाट आएकाको संख्या अहिलेसम्मको खोजमा १४–१५ जना रहको पाइएपनि चैत १ बाट यता ४ जना रहेको पाइएको वडा अध्यक्ष सापकोटाले बताउनुभयो । सबैजनाको स्वास्थ्य ठीक रहेको र सुरक्षित घरमा बसेको पाइएकोले वडाबासीलाई ढुक्क अवस्थामा रहन र सचेत पनि रहन वडा अध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
विदेशबाट फर्किनेहरुको संख्या अरु पनि हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो केही भए खबर गर्न टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । सरकारले लकडाउन गरेको आज चौँथो दिनमा आफ्नो वडामा लकडाउनको पूर्ण पालना भएको तर बाहिरबाट केही व्यक्तिहरु जंगल तर्फ आउने गरेकोमा त्यसलाई नियन्त्रण लिन प्रहरी प्रशसानले सघाउ दिएको सापकोटाले बताउनुभयो । विहिबार व्रिटिश क्याप तिरबाट केही मोटरसाइकललाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । सडकहरुमा ढुंगाहरु राखि बन्द नगर्न समेत वडा अध्यक्ष सापकोटाले बताउनुभयो । वडाको सुरक्षाकालागि प्रशासनसंग सहयोग लिने समेत उहाँको भनाइ रहेको छ ।
प्रत्येक वडाले टोलविकास संस्थाका अध्यक्षहरुको समन्वयमा विदेशबाट फर्किएकाको संख्या लगत संकलन गर्न सकिने सजिलो उपाय रहेको छ । लगत संकलन अनौपचारिक भन्दा पनि औपचारिक रुपमा संकलन गरि उनिहरुको अवस्थाका विषयमा पनि थप अपडेट जरुरी रहन्छ ।